Shaqsiga la hadal haayo inuu ku guuleysan doonno xilka guddoomiyaha Aqalka sare ee baarlamaanka - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shaqsiga la hadal haayo inuu ku guuleysan doonno xilka guddoomiyaha Aqalka sare ee baarlamaanka
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka bilawday diwaan gelinta musharixiinta u tartameeysa xilka gudoomiyaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana haatan la saadaalinayaa shaqsiga ku guuleysan doonno xilkaas.
Shaqsiga sida weyn loo hadal haayo inuu xilkaasi ku guuleysan doonno ayaa ah Cabdi Xaashi C/laahi oo beel ahaan kasoo jeeda Dirta waqooyi ee Somaliland, waana shaqsiga haatan ugu cad-cad inuu xilkaasi ku guuleysan doonno.
Beesha Dirta waqooyi ayaa la sheegayaa in xilkaan loo qoondeeyay, waxaana meesha ka baxay musharax hore oo beel ahaan uga soo jeeda beesha Daarood, kadib markii qoondada miisaanka beelaha ay keentay in Somaliland ama Dirta Waqooyi xilkaan la siiyo.
Cabdi Xaashi C/laahi ayaa ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee ugu khibrada badan, wuxuuna hore ula soo shaqeeyay dowladii hore ee Soomaaliya.
Sidoo kale, Cabdi Xaashi C/laahi ayaa muddo dheer soo ahaa xildhibaan dowladihii ugu dambeeysay ee dalka soo maray, waxaana lagu tilmaamaa shaqsi xamaasad badan oo hadaladiisu ay qalafsan yihiin.
Ugu dambeyntii, maalinta Sabtida ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 21-ka Janaayo ayaa lagu wadaan in musharixiinta ku tartameeysa xilkaan ay soo jeediyaan khudbooyinkooda, iyadoo kadib la dooran doono guddoonka Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya.